အာဖရိကတွင်အလှဆုံးသဲကန္တာရများ: ဆာဟာရမှသည်Teneré | ခရီးသွားသတင်းများ
လူးဝစ် Martinez | 15/09/2021 14:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 17/09/2021 08:57 | အာဖရိကတိုက်, လမ်းပြ
သွားရောက်လည်ပတ် အာဖရိကတွင်အလှဆုံးသဲကန္တာရ ၎င်းသည်သင်စွန့်စားမှုကြီးတစ်ခုသာမကအထင်ကြီးစရာရှုခင်းများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်သည်ဟုယူဆလိမ့်မည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ ဤနေရာအချို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလှဆုံးတို့တွင်ရိုးရှင်းမှုရှိသော်လည်း၊
ဤအရာအားလုံးသည်မလုံလောက်လျှင်တော၌ဝိညာဉ်အတွက်မှော်တစ်မျိုးရှိသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်အကျယ်အ ၀ န်းသည်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများအတွက်မလိုအပ်သောအရာများကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်၊ သူတို့သည်လောကီရေးရာစိုးရိမ်မှုများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးသဘာဝနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်သဲသဲကွဲကွဲမရှိဘဲငါတို့ကမင်းကိုအာဖရိကမှာအလှဆုံးသဲကန္တာရအချို့ကိုပြမယ်။
1 အာဖရိကတွင်အလှဆုံးသဲကန္တာရများ၊ ၎င်းတို့တွင်အဘယ်အရာကိုသင်မြင်နိုင်သနည်း။
1.2 Kalahari သဲကန္တာရ
1.3 Namib သဲကန္တာရဟောင်း
1.4 အာဖရိကတွင်အလှဆုံးသဲကန္တာရတစ်ခုဖြစ်သော Danakil
1.5 Tenerife သဲကန္တာရ၊ ဆာဟာရသဲကန္တာရတစ်ခု၏တိုးချဲ့မှု
ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုက်ကြီးတိုင်း၌အံ့မခန်းတောကြိုတောင်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသောလုံလောက်သည် Atacama တောင်အမေရိကတွင် (ငါတို့ဒီမှာမင်းကိုထားခဲ့မယ် ဒီသဲကန္တာရအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်), ၏ Gobi အာရှ၌၎င်း၊ ကဗျာ ဥရောပ (စပိန်) ။ တိတိကျကျပြောရရင်တောင်ကြိုက်တဲ့နေရာတွေ ဂရင်းလန်း ၎င်းတို့မှာသဲမရှိ၊ နှင်းနှင့်ရေခဲမရှိသောသဲကန္တာရများဖြစ်သည်။
သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနေရာအားလုံးတို့တွင်သဲကန္တာရအရေအတွက်အများဆုံးတွေ့နိုင်သည် အာဖရိကတိုက်မရ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့မှုများသည်ကြီးမားလွန်းသဖြင့်ဤတိုက်ကြီးမျက်နှာပြင်၏ကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုပြဖို့အကောင်းဆုံးအရာကငါတို့ကအာဖရိကရဲ့အလှဆုံးသဲကန္တာရတွေအကြောင်းမင်းကိုပြောပြီးပြီ။
စတုရန်းကီလိုမီတာကိုးသန်းခွဲနီးပါး၊ ငါတို့အရမ်းနီးစပ်တဲ့ဒီသဲကန္တာရဟာပူပြင်းတဲ့တောတွေ (ကမ္ဘာပြီးရင်တတိယမြောက်အကြီးဆုံး) ထဲမှာအကြီးဆုံးဘဲ။ အာတိတ် နှင့် အန္တာတိက) ့။ အမှန်တော့၎င်းသည်၎င်းမှစသည် ပင်လယ်နီ သို့ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာမြောက်အာဖရိကအများစုကိုသိမ်းပိုက်သည်။ တောင်ဘက်သို့အတိအကျသွားလျှင်၎င်းသည်ဒေသသို့ရောက်ရှိသည် sahel၎င်းသည် Sudanese savannah သို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
မင်းမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း၊ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့မြေကွက်ကြီးမှာမင်းမှာကြည့်စရာအများကြီးရှိတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဟာရသဲကန္တာရ၏အကောင်းဆုံးသောအံ့မခန်းသောနေရာအချို့အကြောင်းကိုသာပြောပြပါမည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Moroccan ဒေသရှိသူများအတွက်သာပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အယ်လ်ဂျီးရီးယားတောင်ပိုင်း (သို့) လစ်ဗျားနိုင်ငံရှိဒေသများ၌နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
ငါတို့နဲ့စမယ် Merzougaမော်ရိုကိုနိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသောမြို့ငယ်လေးသည်မမေ့နိုင်သောနေဝင်ချိန်များကိုကြည့်ရှုနိုင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကမင်းအကြောင်းအများကြီးပြောလိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းအရမ်းရင်းနှီးတဲ့သူကိုတွေ့လိမ့်မယ် Erg Chebbiဆာဟာရသဲကန္တာရတစ်ခုလုံးတွင်အံ့မခန်းဖွယ်အကောင်းဆုံးအစုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့သည်အမြင့် ၂၀၀ မီတာသို့ရောက်ရှိပြီးသူတို့၏လိမ္မော်ရောင်သံများဖြင့်မင်းအားထူးခြားသောရူပါရုံကိုပေးသည်။
ဒါကိုလည်းလက်မလွတ်သင့်ပါဘူး draa ချိုင့်သင်အမြဲစိတ်ကူးခဲ့သည့်အတိုင်းသဲကန္တာရကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသဲပြင်ကျယ်များနှင့်အုန်းတောများပါ ၀ င်သည့်အခါအားလျော်စွာအချိန်အခါမဟုတ်ဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ သင်သည်အာဖရိက colossus ၏လူ ဦး ရေအများဆုံးဖြစ်လျှင် Ouarzazate တွင် "သဲကန္တာရ၏တံခါး" နှင့် "Sahara of Hollywood" ဟုခေါ်သော ရှောင်လွှဲ၍ မရသည့်လည်ပတ်မှုရှိသည်။ ဤနောက်ဆုံးနာမည်သည်ဤနေရာတွင်ရုပ်ရှင်များစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Ouarzazate တွင်သင်အထင်ကြီးစရာကိုမြင်ရမည် Taourirt မှ kasbah၁၈ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော adobe fortress သည်ရွှေလမ်းကြောင်းဟောင်းကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နေရာဒေသအပြည့်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဗဟိုစျေးကိုလည်းသွားလည်သင့်တယ်။ Almouahidine ရင်ပြင်နှင့်ယာဉ် souk
နောက်ဆုံး၊ ယခင်မြို့မှဆယ့်ငါးမိုင်ခန့်အကွာတွင်မင်းမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ် kasbah ၎င်းကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်း၏ Ait ben haddouထိန်းသိမ်းမှုကြီးကျယ်ခမ်းနားသော Berber ခံတပ်ကြီးတစ်ခု။
Kgalagadi Transfrontier ပန်းခြံ
နမီးဘီးယား ၎င်းသည်သဲကန္တာရအများဆုံးရှိသောအာဖရိကနိုင်ငံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Kalahari သည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာမက၊ ကျယ်ပြန့်သောအပိုင်းများပါ ၀ င်သည် ဘော့ဆွာနာ y တောင်အာဖရိက (ဒီမှာငါတို့မင်းကိုထားခဲ့မယ် နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာတစ်သန်းနီးပါးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားသားတစ် ဦး က ၁၈၄၉ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ သူ့နာမည်ကသူ့အကြောင်းနှင့်အတော်တူလိမ့်မည် David အသက်ရှင်သောကျောက်ဗစ်တိုးရီးယားရေတံခွန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူ သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်၊ "kgalagadi" သည် "ရေငတ်ခြင်း" ကိုဆိုလိုသည်ဟုငါတို့ပြောလိမ့်မည်။
ဤခံ့ညားသောသဲကန္တာရ၌သင်မြင်နိုင်သည် Chobe အမျိုးသားဥယျာဉ်၎င်းတွင်ဆင်များစွာ၊ ကျွဲ၊ hippos၊ သစ်ကုလားအုတ်များနှင့် impalas များစွာပါ ၀ င်သည်။ ဒါပေမယ့်ခြင်္သေ့တွေကိုတွေ့ဖို့မင်းအဲဒီကိုသွားရမယ် ဗဟို Kalahari Game Reserve.
ဤသဲကန္တာရ၌လည်းထင်ရှားသည် Kgalagadi Transfrontier ပန်းခြံဒါပေမယ့်၊ အားလုံးထက်, the Makgadikgadi ဆားတိုက်ခန်းများ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကြီးဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ နာမည်တူရေကန်ကြီးသည်ခန်းခြောက်သွားသောအခါ၎င်းတို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထက်ပိုကြီးသောဧရိယာကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး၊ ဒါကသူတို့ရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။ လူသားကသူတို့နဲ့ကြားဝင်ခဲပါတယ်။
အာဖရိကရှိအလှဆုံးသဲကန္တာရများထဲတွင် Namib သည်၎င်း၏အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းထင်ရှားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်အကြီးဆုံးမရ။ အမှန်တော့၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၅ သန်းကတည်းကတည်ရှိခဲ့သည်ဟုယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းအားကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်ကြေငြာရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်က၎င်း၏နာမည်မှခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်း၎င်းကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် နမီးဘီးယား ၎င်းသည်ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာရှစ်သောင်းခန့်ရှိသည်။ မင်းအဲဒါကိုသွားကြည့်ရင်သူ့ရဲ့နီကျင်ကျင်သဲတွေကမင်းရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်အချို့ကိုလည်းရလိမ့်မယ်။
အစနှင့်အဆုံးသည်တစ်ခုဖြစ်သည် Cape Croosဥရောပသားများသည် ၁၄၈၆ တွင်ပထမနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်အာဖရိကတစ်ဝှမ်းလုံး၌ပင်လယ်ဝံအကြီးဆုံးအရံနေရာဖြစ်သည်။
ယခင်တစ်ခုနှင့်အနီးကပ်သင်၌ကျော်ကြားသူလည်းရှိသည် အရိုးစုကမ်းခြေ၎င်းသည်နိုင်ငံအတွင်းကုန်းမြေဖြင့်သွားလာမှုအခက်ခဲဆုံးဒေသများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းဒေသတွင်သောင်တင်နေသောလှေများနှင့်ဝေလငါးအရိုးစုများ၏နာမည်ကိုအကြွေးတင်သည်။
ဒါပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် Namib Naukluft ပန်းခြံမီတာသုံးရာအထိမြင့်သောသဲခုံများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ Namib သဲကန္တာရရဲ့အဆုံးမှာတစ္ဆေမြို့လေးပါ Kolmanskop၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင်ဂျာမန်လူမျိုးများတည်ဆောက်ခဲ့သောသတ္တုတွင်းမြို့ဖြစ်သည်။
Danakil သဲကန္တာရရှိ Erta Ale မီးတောင်
၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည် အီရီထရီးယား နှင့်အနောက်မြောက်ဘက်၌ အီသီယိုးပီးအပြည့်အဝ အာဖရိက၏ချိုဤသဲကန္တာရသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအနိမ့်ဆုံးနှင့်အပူဆုံးနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပူချိန်ငါးဆယ်ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်အထက်ရှိသည်။
၎င်းသည်ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာနှစ်သိန်းနှစ်သောင်းနီးပါးရှိပြီး၎င်း၏မီးတောင်များ၊ ချော်ရည်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဆားတိုက်ကြီးများနှင့်ရေကန်များပေါ်လွင်သည်။ ပထမ၊ Dabbahu၎င်း၏အမြင့် ၁၄၄၂ မီတာနှင့် Erta Aleသေးငယ်သော်လည်းတက်ကြွနေဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်းဤမညီညွတ်သောသဲကန္တာရနှင့် ပတ်သက်၍ စပ်စုလိုသောအရာမှာ၎င်းသည်ဇာတိမြေဖြစ်သည် အာဖရိလူခြေသလုံးတွင်ကြီးမားသောကွေးသောဓားများနှင့်သူတို့၏ဆံပင်များကိုကျစ်ဆံမြီးများဖြင့်သွင်ပြင်ပြုထားသောခြေသလုံးသားမျိုးနွယ်စုတစ်စုဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ယာယီအိမ်တွေဆောက်တာဖြစ်ဖြစ် aris သစ်ကိုင်းများနှင့်ပိတ်ထည်များဖြင့်မြို့များကိုခေါ်သည် မြည်း.
Tenerife သဲကန္တာရ၊ ဆာဟာရသဲကန္တာရတစ်ခု၏တိုးချဲ့မှု
အာဖရိက၏အလှဆုံးသဲကန္တာရတစ်ခုအားအဆုံးသတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး၊ အမှန်မှာ၎င်းသည်တောင်ပိုင်းဆာဟာရ၏တိုးချဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေအများကြီးအတွက်သီးခြားစီဆက်ဆံတယ်။ အမှန်အားဖြင့် "teneré" သည် Tuareg ဘာသာစကားတွင် "သဲကန္တာရ" ကိုဆိုလိုသည်။
စတုရန်းကီလိုမီတာလေးသိန်းခန့်တွင်၎င်းသည်အနောက်ဘက်မှဆန့်သည် ချဒ် ၏အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ နိုင်ဂျာမရ။ ပြီးတော့မင်းသူ့အကြောင်းဆက်မပြောခင်ငါတို့ကမင်းရဲ့သိချင်စိတ်ကိုတခြားသူကိုပြောပြလို့မရဘူး။ ခေါ်ဆိုမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် Ténéréသစ်ပင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထီးကျန်စွာအထွတ်အထိပ်ဖြစ်နေခြင်းကိုအနည်းဆုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသောကြောင့်၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကီလိုမီတာများစွာ၌တစ် ဦး တည်းသောသူဖြစ်သည်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင်၎င်းကိုထရပ်ကားတစ်စီးဖြင့်ဖြိုဖျက်ခဲ့ပြီးယနေ့ပြန်လည်သတိရလာသည့်သတ္တုပန်းပုကို၎င်း၏နေရာကိုသိမ်းပိုက်သည်။
သို့သော်Ténéréသည်အခြားအကြောင်းများကြောင့်အာဖရိကတွင်အလှဆုံးသဲကန္တာရများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဲသောင်ပြင်သည်ကြီးမား။ ဆိတ်ညံသောရှုခင်းကြောင့်၎င်းကိုစတင်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်းရှေးဟောင်းသုတေသနများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းက၎င်း၏နေထိုင်ရာဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏ရာသီဥတုသည်ကွဲပြားခဲ့သည်။
တကယ်တော့၌တည်၏ Tassili n'Ajjerဧရိယာအတွင်းမြေပြန့်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရေးအပါဆုံးရော့ခ်အနုပညာလက်ရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Neolithic ခေတ်မှပန်းချီကားချပ်များနှင့်ပန်းချီကားချပ်နမူနာပေါင်းတစ်သောင်းငါးထောင်ထက်မနည်းကိုဤဒေသရှိဒေသခံများ၏ဘ ၀ နှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်အဓိကအားဖြင့်ကိုက်ညီသည် kiffian ယဉ်ကျေးမှု.
အခြားတစ်ဖက်တွင်နိုင်ဂျာနှင့်သက်ဆိုင်သောဧရိယာ၌အံ့မခန်းဖြစ်သည် အာရ်တောင်တန်းများSahelian ရာသီဥတုရှိသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ အမြင့် ၁၈၀၀ မီတာသို့ရောက်သောအခါ၊ ထူးခြားသောဘူမိဗေဒပုံစံများရှိသည်။
ဤတောင်များနှင့်သဲကန္တာရများအကြား၊ မြို့ဖြစ်သည် AgadezTuareg ယဉ်ကျေးမှု၏ fiefdoms များထဲမှတစ်ခု၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဒီမြို့ငယ်လေးကမင်းအတွက်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ထင်ဖို့သင်သွေးဆောင်ခံရနိုင်တယ်။ လက်တွေ့နဲ့ဘာမှထပ်မကွာပါဘူး။ ၎င်း၏သမိုင်းဝင်အချက်အလတ်ကိုကြေငြာလိုက်ပြီ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်သူသည် Tenerife သဲကန္တာရတစ်ခုလုံးနှင့်မျှဝေသောဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမှန်တော့သမိုင်းကြောင်းအရ၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများစွာအတွက်အကူးအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့ပင်၎င်းသည် ဦး တည်ရာ၏ထွက်ပေါက်ဖြစ်သည် ဆာဘားကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသူအရောက်အပေါက်နည်းဆုံးသောလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုလူတိုင်းမရရှိနိုင်ပါ။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ငါတို့သည်အာဖရိကရှိအလှဆုံးသဲကန္တာရအချို့ကိုသင်ပြခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကတခြားသူတွေကိုအဲလိုပြောနိုင်ပါတယ် Lompoulဆီနီဂေါတွင်လိမ္မော်သဲသဲများနှင့်အတူ၊ ၏ ထွန်းကင်ညာ၊ Kilimanjaro အနီး၊ သို့မဟုတ်၎င်း Ogadenအီသီယိုးပီးယား၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သွားရန်တတ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » လမ်းပြ » အာဖရိကတွင်အလှဆုံးသဲကန္တာရ